बजार : ७० हजार पुगेको सुनको भाउ आज कति पुग्यो ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २७ श्रावण सोमबार १६:५३
बजार : ७० हजार पुगेको सुनको भाउ आज कति पुग्यो ?
एजेन्सी, काठमाडौं। साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा कुनै घटबढ भएको छैन । आइतबार सुन प्रतितोला ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आजपनि फेरि सुन प्रतितोला ७० हजार रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जानकारी दिएको छ ।
आइतबार तेजावी सुन प्रतितोला ६९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ भने आजपनि सुन प्रतितोला ६९ हजार ७ सय रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको जनाएको छ। यसैगरी, आइतबार चाँदी प्रतितोला ८ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आजपनि चाँदी प्रतितोला ८ सय २५ रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको छ ।
सुनको भाउ बढेसँगै किन्ने भन्दा गहना बेच्ने ग्राहकहरु बढीरहेको सुन व्यसायीहरुको गुनासो छ।
शेयर बजार : नेप्से पुनः ओरालो यात्रामा
बजार : सुनकाे मूल्य हालसम्मकै उच्च, तोलामा १२ सयले बढ्याे
तिज रौनक : सक्कली सुन भन्दा नक्कली सुन किन्नेहरु ह्वात्तै बढे
PREVIOUS Previous post: इन्द्रजात्रामा ४० देशका प्रतिनिधिलाई निम्ता
NEXT Next post: सुर्खेतमा ज्ञानेन्द्र शाहीको कार्यक्रम शुरु हुन् नपाउँदै विरोध प्रदर्शन